कोरियामा जाडो शुरु,सियोलमा आज यो सिजनको पहिलो हिमपात! – Kantipur Press
कोरियामा जाडो शुरु,सियोलमा आज यो सिजनको पहिलो हिमपात!
सियोलमा बुधबार बिहान यो मौसमको पहिलो हिमपात भएको छ, गत वर्षको तुलनामा करिब एक महिना अघि हिमपात भएको कोरियाली मौसम एजेन्सीले बताएका छन।
सियोलको सडकमा आज विहान हल्का परेको हिउँ,कोरिया टाइम्सबाट
कोरिया मौसम प्रशासन (KMA) ले मध्य सियोलको सङवल दोङ मौसम पर्यवेक्षण स्टेशनमा बिहान ६:१० मा हल्का हिउँ परेको बताएको छ। KMA ले सोङवोल- दोङ मौषम पर्यवेक्षण प्रयोगशालामा देखेको पहिलो हिउँलाई प्रत्येक वर्षको सिजनको पहिलो हिउँको रूपमा रेकर्ड गर्दछ।
यस वर्षको पहिलो हिउँ गत वर्षको तुलनामा ३० दिन अघि सियोलमा परेको छ,गत बर्ष यो डिसेम्बर १० मा परेको थियो र राजधानीको पहिलो हिउँ १९९१-२०२० को औसतभन्दा १० दिन अगाडी परेको केएमए ले बताएको छ।
राजधानी लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा पनि आज बिहान हल्का हिमपात भएको छ ।
१० हजार श्रमिक पीडामा हुँदा नबोलेका महङ्गो शुल्क लिने इन्स्टिच्युट अहिले भाषा परीक्षा हुन्छ भन्न थालेपछि!
कोरियामा राम्यन पारखी हरुलाई दुख:द खबर !